Izindaba - Ukwenza indlela yeHook and buckle
Ukusungulwa kuphathelene ne-hook-and-loop exhuma okungenani izingxenye ezimbili, njengehhanisi nelungu langaphambili.
Ingemuva: I-hook-and-buckle uhlobo lwezintambo, ibhande, nezinye izingxenye ezenzelwe ukuthi zisebenziseke ekusebenziseni kuzinhlelo eziningi ezahlukahlukene.
I-clasp iqale isetshenziselwe imichilo, imichilo noma okunye okufana namazinga ahlukahlukene wokunwetshwa, njengokumiswa kwezinsana nojosaka abahlukahlukene.
Injongo yokwakhiwa kwamanje ukwethula i-hook-and-buckle eyenziwe ngcono engalungiswa futhi ithululwe ngesandla. Enye into yokwakhiwa kwamanje ukuphakamisa ingwegwe lapho indlela yokukhiya ingathinteki nhlobo, noma kuphela ngokuncane, ngamandla avela emgqeni ongaguquki noma okulingana nawo.
Enye inzuzo yehhuku ngokwendlela esungulwe ngayo manje ukuthi ingxenye yehhuku iyakhonjiswa, uma ilungisiwe, ukuba ibe semaphakathi nendawo futhi ikhombise ukuthi ingwegwe ikhiyiwe ngokucacile.
Ingidi nayo inokwethenjelwa ukuze i-clasp ingavulwa ngaphandle kokungenela ngamabomu, futhi lapho amandla athinta ukuboshwa kwensimbi elungisiwe esebenza ngendlela yokukhiya, ukubopha kulungiselelwe ukwenza ukuthi i-clasp isetshenziswe ngendlela i-fastener, amandla ku-clasp anento, ngakho-ke amandla anomphumela ohlangene ku-clasp.
Umsebenzi wokukhiya wezingxenye ezimbili ezihlukanisiwe kodwa ezixhunywe ngokuqinile ulawulwa ngemuva kokuthi izingxenye zilethwe endaweni yokukhiya, ngaleyo ndlela kubonakaliswe isimilo esihle sehhuku ngokwalokho okusunguliwe. Ngaphezu kwalokho, umsebenzi wokukhiya uhlelwe engxenyeni yokwakha umkhono.
Izingwegwe nezibopho ngokwokusungulwa zingasetshenziselwa izinhloso eziningi ezahlukahlukene, njengamabhande asezintanjeni nasemhlane we-canvas, izikhwama nokunye okunjalo, ukubopha izimoto, amathoyizi nezinqola ezisongekayo zezingane, kanye nezingubo nezemidlalo, ukuhanjiswa kweBelt kanye ibhande ezintweni zokuzilibazisa.
Ngakho-ke noma iyiphi ingxenye noma izingxenye ezimbili ze-clasp zingaba yingxenye ebalulekile yengxenye ezosetshenziswa nayo. Idivayisi ngokusungulwa nokusetshenziswa kwedivayisi inezici eziboniswe kulolu hlelo lokusebenza lobunikazi.
Isikhathi Iposi: Apr-09-2021
Ama-Lag Bolts, Isakhiwo Bolts, Izinqola Zokuhamba, Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine, U Bolts, I-Hex Bolts,